विशेष ‘खुकुरीको धार’मा शीर्ष नेता, को कति सुरक्षित ?
Ujyaalo बिहिवार, मंसिर २१, २०७४ ०५:२९:००
काठमाडौं, मंसिर २० –दोस्रो चरणमा बिहीबार हुने चुनावमा सबै तयारी पूरा भएको छ । मतदाता ढुक्क भएर भोट हाल्न तयार छन् । तर जति मतदानको समय नजिकिँदै छ उति नै चुनाव लड्ने नेताको धड्कन भने बढ्दै छ । केही उम्मेदवारले सजिलै चुनाव जित्ने आँकलन सार्वजनिक भैसकेका छन् । तर शीर्षसहित केही नेतालाई भने चुनाव जित्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो चरणको चुनावमा कुन दलका कुन नेता ‘खुकुरीको धार’मा छन् त ?
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विक्रम पाण्डे
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा का उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे चुनावी प्रतिष्पर्धामा रहेकाले यतिबेला चितवन क्षेत्र नम्बर ३ दोस्रो चरणको चुनावको सबैभन्दा चर्चाको क्षेत्र बनेको छ । २०७० सालको चुनावमा कांग्रेसले एक र राप्रपाले एक सिट जितेको ठाउँमा अहिले प्रचण्ड उम्मेदवार हुनुहुन्छ । प्रचण्डले चितवन ३ का नागरिकले आफूलाई जिताउने र आफूले नै देशकै नेतृत्व गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । पाण्डेले पनि चितवन ३ बाट जितेर देशकै नेतृत्व गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला विक्रम पाण्डे भूमिसुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कुनै समय प्रचण्डकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य रहेका पाण्डेले अहिले प्रचण्डलाई नै टक्कर दिइरहनुभएको छ । एउटै मन्त्रीमण्डलमा रहेर काम गरे पनि विक्रम पाण्डेले जनयुद्ध कालमा आफूले माओवादीबाट पाएको सास्तीको क्षतिपूर्ति चुनावबाटै असुल्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । तर प्रचण्डले विक्रम पाण्डेले जिते एउटा सांसद भएर थन्किने तर आफूले जिते देशकै नेतृत्व गर्ने भएकाले विक्रम पाण्डेसँग आफ्नो तुलना नै गर्न नमिल्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
क्षेत्र ३ मा स्थानीय तहको १९ वडाको हिसाब गर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेभन्दा कांग्रेसको मत बढी छ । १९ वडामध्ये ६ वटा एमाले ३ वटा माओवादी र ११ वटा वडा कांग्रेसले जितेका हुन् । प्रचण्ड र विक्रम पाण्डेको जितको सुनिश्चितता भने कांग्रेसकै भोटमा निर्भर रहेको छ । चितवन ३ मा कांग्रेसको आफ्नो उम्मेदवार नभएकाले कांग्रेसका कार्यकर्ता र कांग्रेसप्रति सुभेच्छा राख्नेहरुको मतले नै चितवन ३ को जितको फैसला गर्नेछ ।
देशैभर कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धन छ । तर झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा भने वाम र राप्रपा एकातिर अनि कांग्रेस अर्कोतिर भएका छन् । यहाँ कांग्रेसबाट प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । यो क्षेत्र अन्तर्गतका कचनकवल र हल्दीबारी गाउँपालिकामा राप्रपा विजयी भएको छ भने क्षेत्रकै केन्द्रबिन्दुमा रहेको भद्रपुर नगरपालिकामा एमालेले मेयर, उपमेयरसहित अत्याधिक बहुमत ल्याएको छ । स्थानीय तहमा कांग्रेस यो क्षेत्रको तेस्रो शक्ति मात्र बनेको थियो । यसले सिटौला वास्तवमै कठिन लडाईँका लागि मैदानमा उत्रिएको देखाउँछ ।
प्रदिप ज्ञवाली र चन्द्र भन्डारी
गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ मा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट प्रदिप ज्ञवाली र कांग्रेसबाट चन्द्र भण्डारीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । अघिल्लो चुनावमा निकै कडा टक्कर दिएर हारेका प्रदिप ज्ञवाली यसपटक नतिजा आफनो पक्षमा ल्याउने जोडमा हुनुहुन्छ भने चन्द्र भण्डारी आफनो क्षेत्र जोगाउने दाउमा हुनुहुन्छ । ०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा चुनावमा एमालेबाट ज्ञवाली र कांग्रेसबाट भण्डारी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला भण्डारी पराजित हुनुभएको थियो । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने ज्ञवाली भण्डारीसँग पराजित हुनुभएको थियो । पूराना २ निर्वाचन क्षेत्रलाई गाभेर एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनेको गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ मा स्थानीय तह र पूरानो मतलाई समेत आँकलन हेर्दा वाम गठबन्धन शक्ति बलियो देखिएको छ ।
विमलेन्द्र निधी र राजेन्द्र महतो
धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी र राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोका कारण निकै चर्चामा छ । मधेसका २ प्रभावशाली नेता एउटै क्षेत्रबाट चुनाव लडेकाले यो मधेसको यो क्षेत्र चर्चामा छ । सर्लाही ४ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका महतोले अन्तिम समयमा विमलेन्द्र निधिसँगको लडाइ रोजेपछि धनुषा तात्तिएको छ ।
धनुषा ३ मा जनकपुर उपमहानगरको १ देखि १६ र २०, २३ देखि २५ वडा पर्छ । यस्तै नगराइन नगरपालिकाका साथै धनौजी र मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका र विदेह नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ यो क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय तहमा पाएको भोट हेर्दा यो क्षेत्रमा १ हजार मतले कांग्रेस अघि रहेको छ ।
शेरबहादुर देउवा र खगराज भट्ट
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेल्धुरा १ मा जितलाई निरन्तरता दिने दाउमा हुनुहुन्छ भने वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता खगराज भट्ट देउवाको जितमा ब्रेक लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । २०६४ सालको चुनावमा माओवादीका खगराज भट्ट देउवासँग १३ सय मतान्तरले पराजित हुनु भएको थियो । २०७० को चुनावमा उहाँ देउवासँगै झण्डै दोब्बर मतअन्तरले हार्नुभयो । पाँच गाउँपालिका र दुईवटा नगरपालिका रहेको डडेल्धुरामा एमाले र माओवादीको मत जोड्दा २७ हजारको हाराहारी पुग्छ भने कांग्रेस १९ हजार आसपासमै सीमित छ ।
स्थानीय तहको मत र एमाले माओवादी तालमेलका कारण डढेल्धुरामा वाम उम्मेदवार विजयी हुने उत्साह कम्युनिष्ट समर्थकमा बढेको छ । तर २५ वर्षको विरासत बोकेका तथा राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य पात्र शेरबहादुर देउवा नै उठ्ने भएकाले चुनाव सजिलै जितिँदैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन् ।
घनश्याम भुसाल र दीपक बोहरा
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ पनि सबैको चासोको क्षेत्र बनेको छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहरा यहाँ प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल विचारकका रुपमा र राप्रपा प्रतातान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहोरा पञ्चायतकालदेखिकै शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ ।
संगठन नै नभएको रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा बोहोरा विजयी हुनुभएको थियो । अघिल्लो चुनाव एक्लै जितेका बोहोरालाई अहिले कांग्रेसको साथ रहेको छ । भुसाल भने २०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणसँग १ सय भन्दा कम मतले पराजित हुनुभएको थियो । वाम गठबन्धनको पक्षमा ३१ हजार ५ सय र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा २६ हजार ९ सय मत रहेको स्थानीय चुनावको आंकडा छ ।
आरजु राणा र नारदमुनी राना
सात नम्बर प्रदेशको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र –५ मा कांग्रेस नेतृ तथा प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आरजु राणा र वाम गठबन्धनबाट एमालेका नारदमुनी राना उम्मेदवार हुनुहुन्छ । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जितेको यो क्षेत्रमा आरजुले टुरिष्ट उम्मेदवारको आरोप खेपिरहनुभएको छ । वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नारदमुनि रानाले ‘थारु’ समुदायको मत तान्ने अपेक्षा सहित जित्ने दाबी गरिरहनुभएको छ । राना थारूको बाक्लो बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा त्यो समुदायका ३० हजार मतदाता रहेका छन् ।
कमल थापा र कृष्णप्रसाद दाहाल
मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ मा १८ वर्षपछि पुराना दुई प्रतिस्पर्धी मैदानमा उत्रिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र एमाले तीन नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालबीच १८ वर्षपछि चुनावी मैदानमा भेट भएको हो । पञ्चायतकालीन राजनीतिक हस्ती थापा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा मकवानपुर ३ बाट उम्मेदवार बनेर तेस्रो हुनुभएको थियो ।
२०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने उहाँले श्रीमती प्रलिता थापालाई क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनाउनुभयो । एमाले मकवापनुरका नेता कृष्ण दाहाल २०६४ र ०७० दुबै चुनावमा उम्मेदवार बन्नुभएन । स्थानीय तहको चुनावमा यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको ४० हजार १ सय ३६ ल्याएको छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको ३२ हजार ४ सय ९७ मत छ ।
गगन थापा र राजन भट्टराई
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता र एमालेका बौद्धिक नेता राजन भट्टराईबीचको प्रतिस्पर्धाले निकै रोचक बनेको छ । थापा यसअघि २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा त्यसै क्षेत्रबाट भारी मतका साथ विजय हुुनुभएको थियो भने भट्टराई परराष्ट्र मामिलाका विज्ञका रुपमा सभासद् मनोनित हुनुभएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. १, ७, ८ र ३० तथा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा फैलिएको यो क्षेत्रमा ४० हजार मतदता छन् । गएको स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्षहरुले पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने यो क्षेत्रमा वाम गठबन्धन बलियो छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस क्षेत्रमा एमालेले १७ हजार दुई सय ३९, माओवादी केन्द्रले ४ हजार ८७ गरी २१ हजार तीन सय २६ मत पाएको छ भने कांग्रेसले १४ हजार ७६ र राप्रपाले एक हजार सात ७३ गरी १५ हजार आठ सय ४९ मत पाएको छ ।
उपेन्द्र यादव र उमेश यादव
प्रतिनिधिसभातर्फ सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वाम गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य उमेश यादव, स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएका राजपाका पूर्व सहमहामन्त्रीसमेत रहेका जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले पनि उपेन्द्र यादवलाई नै सहयोग गर्ने भएको छ ।
झण्डै ७९ हजार २ सय ६३ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा फोरम–राजपाको चुनावी गठबन्धन र एमाले–माओवादीबीचको चुनावी तालमेललाई हेर्ने हो भने यी दुई गठबन्धनबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । फोरम अध्यक्ष यादवले पहिलो संविधानसभामा मोरङ र सुनसरीको दुवै क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो । तर २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा सुनसरीबाट विजयी हुनुभयो । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्व सिचाई मन्त्री उमेशप्रसाद यादवले पनि यसअघि २०७० सालको चुनावमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाटै फोरमका शलेन्द्रप्रसाद साहलाई पराजित गर्नुभएको थियो ।
विश्वप्रकाश शर्मा र सुरेन्द्र कार्की (राम)
झापा क्षेत्र नम्बर १ वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार (राम) कार्की रहेका छन् र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ । दुबै जना बौद्धिक नेतामा चिनिहुन्छ तर एकजना भने पराजित हुनैैपर्नेछ । २०७० सालको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मा एमालेका रविन कोइरालासँग झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभएको थियो ।
झापा क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख ९ हजार ६ सय ७६ मतदाता छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा यहाँ नेपाली कांग्रेसको २५ हजार ५ सय १ मत छ भने एमालेको २५ हजार ६३ मत छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको ९ हजार ८ सय ८८ मत छ स्थानिय तहको मतलाई आधार मान्दा झापा १ मा वाम गठबन्धन ९ हजार ४ सय ५० मतले कांग्रेसभन्दा अगाडि छ ।
यो पटक प्रतिनिधिसभामा १६५ मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले पनि शीर्ष नेताहरु खुकुरीको धारमै उभिएको जस्तो छ ।